Fanarahan-dia niteraka fahafatesana :: Miaramila voatonontonona tamin’ny fitifirana lehilahy roa • AoRaha
Fanarahan-dia niteraka fahafatesana Miaramila voatonontonona tamin’ny fitifirana lehilahy roa
Voatondro tamin’ny famonoana olona roa ireo miaramila any Belobaka-Tsiroanomandidy, tamin’ny 6 avrily lasa teo. Olona mpanara-dia omby halatra nalain’ny dahalo tany Ambondrombe kaominina Manandaza any Miandrivazo iretsy namoy ny ainy. Miaramila miambina ny tanànan’i Soanafindra-Belobaka kosa ireto misy miampanga fa nitifitra ireto.
Samy nandefa manamboninahitra any an-toerana, araka ny loharanom-baovao, ny lehiben’ny Tafika sy ny Zandarimaria ao amin’ny faritra Bongolava rehefa naheno an’ity tranga ity. Tsy misy manamarina na mandiso an’io zava-nisy io izy ireo rehefa nanontaniana, omaly.
“Misy zavatra roa mifanohitra, hatreto, no heno avy any an-toerana. Ao ny filazana fa maty voatifitry ny dahalo ireo olona ireo. Misy indray mitatitra fa notifirin’ireo miaramila mpiambina ny tanànan’i Soanafindra ireo olona ireo satria noheverin’izy ireo ho dahalo”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ireo mpitandro filaminana any Tsiroanomandidy.
Miandry ny tatitra ataon’ireo manamboninahitra avy amin’ny Tafika sy ny Zandarimaria izay lasa nidina nijery ifotony ny zava-misy any amin’ilay toerana, noho izany, vao fantatra ny marina momba ny antony nahafaty an’ireo olona roa mpanara-dia ireo. Nisy basim-borona miisa dimy nentin’izy ireo no notazonin’ireo miaramila miambina tanàna.
Mafampana ny asan-dahalo any amin’iny faritra Bongolava iny, tato anatin’ny andro vitsy izay. Tsy ny any ambanivohitra ihany fa hatramin’ny ao an-tampon-tanànan’i Tsiroanomandidy no isehoan’ny fanafihana sesilany. Miditra an-tsehatra manampy ny polisy ireo Tafika ao amin’ny Vondrona iraisam-piadiana na BIA any Andranomadio. “Misy ny fandehanan’izy ireo mihodinkodina manerana ny tanàna mandritra ny alina”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Asa ratsy – Ambohidratrimo :: Mampiasa tampim-bava ireo mpanafika
Herisetra ara-nofo :: Lehilahy roa voatondro ho nanolana ny zana-badiny